Sidee loo Dhejiyaa Twitter-ka? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
April 27, 2021 0 comments 334
Adoo ku dhejinaya twitter, waxaad la wadaagi kartaa noocyo badan oo ka kooban. Kuwani waxay ku kala duwan yihiin mawduucyada aan dhammaadka lahayn. Laga soo bilaabo siyaasadda, tweets news, madadaalo, tweets ka soo jeeda dadka bulshada, iyo kuwo kale oo badan.
Laakiin, Ma fahansanahay waxa tweet uu yahay? Kani waa magaca loo xilsaaray daabacaadda oo aad ku sameyn kartid twitter-ka. Waxay leedahay qaab iyo qaab gaar ah.
Qof kasta oo ku soo biira shabakadan wuxuu yeelan doonaa awood uu kula wadaago farriimahooda, wakhti kasta. Shabakaddan bulsheed, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ogaato in daabacaaddaadu ay ka koobnaan doonto oo keliya 280 xaraf, laakiin waxaad ku dari kartaa sawirro, gifs iyo fiidiyowyo.
Si aad u bilawdo daabacaadda, raac tilmaamaha hoose:
Gal Gal twitter
Tag sanduuqa xagga sare ee waqtigaaga koontada.
Sanduuqan waxaad ku qori doontaa qoraalkaaga. Qeybteeda hoose, waxaad ka heli doontaa astaamaha lagu daro sawirrada, gif iyo fiidiyow. Waxaad ku dari kartaa ugu badnaan 4 sawir.
Markaad sameysid qoraalkaaga, riix "Twitter".
Dhamaan tweets-ka aad sameysid waxaa lagusoo bandhigi doonaa safka waqtiga kootadaada, iyo waliba dhamaan tweets-ka kuwa raacsan.
Dib u soo celi
Retweet waa habka aad ula wadaagi karto tweets taageerayaashaada. Kaliya u gudub astaanta ku taal salka hoose ee tweet-ka. Astaantan ayaa u eg qaab wareeg ah, taas oo markii aad riixdo midabkeeda beddeli doonta waxaadna ka dhigi doontaa mar labaad.
Xaaladaha aad rabto inaad kaydiso qoraalkaaga, riix x xagga sare ee sanduuqa. Ka dibna ku dhufo badbaadi.
Twitter wuxuu kuu ogolaanayaa inaad jadwaliso boostadaada. Si tan loo sameeyo, waa inaad gujisaa astaanta "kaalandar", oo ku taal dhinaca hoose ee sanduuqa. Xullo waqtiga daabacaadda oo guji xaqiiji.
Waad heli kartaa tweets-ka aan la dirin, oo markaa dib u eegis ku samee tweets-ka la qorsheeyay, haddii ay dhacdo inaad rabto inaad wax ka beddesho.
Isticmaalka astaamaha 'tweet', waxaad awood u yeelan doontaa inaad fahanto sida loo daabaco qoraalka. Tani markeeda waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fiican u fahamto macnaha guud iyo qoraaga tifaftirka, ka dibna go'aan ka gaadho haddii aad rabto inaad sii wadato inaad aragto noocyada noocaas ah ee 'tweets' lagu calaamadeeyay sida ay u kooban yihiin
Sumadda ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'twitter' waa shaki la'aan hashtag caan ah. Waxaa lagu gartaa astaanta #. Astaantan waxaa loo adeegsaday si loogu ururiyo daabacadaha inta harsan ee tweets oo tilmaamaysa mowduuc gaar ah. Badanaa waxaa loo isticmaalaa isbeddellada ama mowduuca isbeddelaya.
Sidee loo tirtiraa Tweets-kaaga?
Haddii sabab kasta ha noqotee aad go'aansatay inaad tirtirto mid ka mid ah tweets-ka aad ku qortay twitter-ka, kaliya raac talaabooyinka hoose:
Raadi qoraalka aad rabto inaad tirtirto. Soo hel astaanta ellipsis oo guji
Liiska hoos u dhaca ah, dooro ikhtiyaarka "Tirtir tweet".
Boggaaga boggaaga ayaa si otomaatig ah u cusbooneysiin doona iyada oo aan la soo dhigin tweet-ka.
Waa inaad maskaxda ku haysaa inaad kaliya ka tirtiri karto tweets koontadaada. Haddii ay dhacdo inaadan rabin inaad ka aragto tweets isticmaalayaasha qaarkood, waa inaad aamusisaa.
Waxa kale oo suurtogal ah inaad tirtirto retweet aad sameysay. Tan awgeed, u tag astaanta retweet ee ku taal salka hoose ee tweet-ka. Hal mar riix illaa retweet-ka ka baaba'o.
1 Si aad u bilawdo daabacaadda, raac tilmaamaha hoose:
2 Dib u soo celi
4 Calaamadaha Tweet
5 Sidee loo tirtiraa Tweets-kaaga?
Sidee loo sameeyaa wicitaano lacag la'aan ah Telegram?